BBC Somali - Cayaaraha - Arsenal 3-0 West Brom
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 5 Novermber, 2011, 18:31 GMT 21:31 SGA
Arsenal 3-0 ayay kaga badisay kooxda West Brom.
Waxay ahayd cayaar xiise leh.
Goolasha sadexda ah waxaa Arsenal u kala dhaliyay cayaaryahanadooda Van Persie oo daqiiqadii 22-aad goolka hore ansixiyay,iyadoo isla qaybtii hore ee cayaarta uu cayaaryahanka Vermaelen uu goolka labaad daqiiqadii 39-aad dhaliyay.
2-0 ay Arsenal ku hogaaminayso iyadoo lagu kala nastay ayaa markii qaybta labaad la isugu soo laabtay uu cayaartyahanka Arteta ee qadka dhexe uu goolka sadexaad u dhaliyay kooxda Arsenal.
Arsenal waxay hadda leedahay 19 dhibcood, waxay isku dhibco yihiin kooxaha Tottenham oo cayaartay oo kaliya 9 kulan halka Arsenal ay 11 dheeshay, iyo kooxda Liverpool, balse labada kooxba way ka goolal dhalis badnaayeen.
Arsenal kaalinta todobaad ayay ku jirtaa.
Kooxda West Brom waxay ku jirtaa kaalinta 13-aad oo 11 dhibcood ayay leedahay.
Waxaa dadka ka faalooda cayaaraha ay u arkaan kooxda Arsenal oo xilli cayaareedkan tartanka ku bilowday si gaabis ah iyo cayaarihii ugu horeeyay oo si xiriir ah looga badiyay, in ay hadda si xowli ah oo aad u muuqata ay dib ugu soo kabsanayaan.
Waxaaba hadda ay gaartay in qaarkood ay tilmaamaan in Arsenal ay noqon karta kooxaha tartanka rajada ka qabi kara in ay ku guulaystaan, balse tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger, wuxuu leeyahay wali taas lama gaarin, balse ka mid noqoshada 4 koox ee ugu saraysa waa macquul ayuu leeyahay.